Su Server VoIP na Environment!
DataCenter VoIP bụ nhọrọ kasị mma maka mgbazinye / mgbazinye nke raara sava Internet telephony (VoIP)!
Gbalịa Ugbu a!
Ọ bụ ihe kasị mma nhọrọ maka mgbazinye, mgbazinye ma ọ bụ mgbazinye nke raara sava Internet telephony VoIP!
Dedicated Nkịtị Servers
Ndị kasị mma anụ ahụ nkesa ma ọ bụ raara onwe ya nye nkesa Windows nkesa 2008 na Spanish maka VoIP telephony gụnyere IP telephony software “VoipSwitch” karịsịa maka olu n'elu IP.
VoipSwitch Klas 5 SoftSwitch 980, IP telephony software na niile ngwaọrụ VoIP “Turnkey” jikwaa udu, clientes, suppliers na nkesa (resellers) na ha onwe ha VoIP ika.
Ha na-sava anyị
Nkwanye ùgwù maka Environment
The Data Center eji hydropower ServerVoIP!
Gị Company Internet Telephony VoIP World n'ebe ọ bụla
Forma parte de ServiMatango C.A. na a raara nye enye mgbazinye nke raara sava IP Telephony VoIP. The VoipSwitch n'elu ikpo okwu na-iji jikwaa, jikwaa ma nyochaa ha gbalụ gbalụ ngwaọrụ ma ọ bụ nka. Ya mere, ị n'ịwa ahịa, Distributors Suppliers abatakwa na-ụdị na-a ịga nke ọma na-azụ ahịa na ya onwe ya Internet telephony ụlọ ọrụ na bụ larịị na nnukwu telekomunikashions ụlọ ọrụ mgbe na-enye n'ụwa nile VoIP nkeji.
Anyị nwere ukwuu zụọ mkpara iji hụ nnyefe nke ọrụ anyị na afọ ojuju-arụ ọrụ. All ozi anakọtara site ServerVoip.com bụ nzuzo ma na-echebe iji gbochie n'enweghị ikike ohere. Anyị ahịa uloru ga nye ndụmọdụ site chat, web na ekwentị si Monday ka Friday si 07,30 am na-15:00 pm (Bogotá hour, Lima, Quito, UTC / GMT -5).
Anyị na-enye ndị ahịa anyị ohere ịmepụta na ịzụlite ọma ulo oru na-eme ka aku n'uba site ndokwa nke mba Internet ọrụ ezigbo nkà na ụzụ àgwà, kụziri site na nke kacha mma ọkachamara na ụwa.
Dịkwuo ugwu na mba ude ka ndokwa nke elu àgwà ọrụ, na-ebute ụzọ akụrụngwa na pụtara ìhè n'ihi na mma na ọrụ na ọzụzụ nke mmadụ talent.
Ụfọdụ oge gara aga nke dị n'ógbè Imbabura; ukwu abụọ ọhụụ Franklin na Nelly kpebiri ịga n'ihi na oké echiche: "Na-egosi na Ibarra-Ecuador nwere ike ime ihe ukwu". Na otú malitere ha ụzọ ịga nke ọma: mmejuputa atumatu na 2008, ọrụ Mgbazinye / mgbazinye ServerVoip.com Servers; enyere ndị mmadụ aka na ulo ike na ịzụlite ha onwe ha azụmahịa Internet Telephony (VoIP) na aka na Alosip.com, nkeji iji na-enye Internet oku. Ruru ka nọgide uto nke ọrụ ndị a, kpebiri na-etolite ụlọ ọrụ ya na iwu aha aha: Matango Services Company Limited "ServiMatango ca". Malitere arụmọrụ ke 2012 iji nye otutu ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu na ulo ya mere ha nwere ike ịmepụta na ịzụlite ha onwe ha azụmahịa online n'ebe ọ bụla n'ụwa. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na, renting sava na VoipSwitch n'elu ikpo okwu mejuputa Internet ọkpụkpọ ọrụ, Ọ bụ idé nke ụlọ ọrụ.
Iguzosi ike n'ihe Discipline n'ubi, akpọnwụwo Social Ibu Ọrụ Inyefe Onwe Ike n'Ezi Kwanyere Ndidi Healthy Ogologo okwu coexistence
M, Franklin cucumbers: "Achọrọ m egosi na m na compatriots, ịga nke ọma ná ndụ na-adịghị mkpa iga njem mba ndị ọzọ. Ebe a na Ecuador ma ọ bụ na mba ebe ha na-ebi na mbanye, ọmụmụ, mkpebi siri ike na ịnụ ọkụ n'obi; na ndị ahụ na-etinye onwe ha na-atụ mgbe ná mba ọzọ ị nwere ike nweta ihe ukwu ".
N'eziokwu ya VoIP DataCenter Anyị Team
The data center bụ nke zuru okè imekọ ihe ọnụ n'etiti ndị mmadụ, igwe na uwa. N'ihe karịrị afọ atọ nke atụmatụ na-ewu ụlọ na a mmefu ego nke ihe karịrị 17 nde euro, na otu enweta ihe mgbaru ọsọ nke na mmejuputa atumatu ihe eco-enyi na enyi data center, na n'otu oge na ikenyeneke mbiet technology.
The ụlọ-na-ulo na sava na Europe na United States bụ data emmepe greener na e wuru dị ka data nchekwa echiche. The stratejik ọnọdụ Central Europe na United States bụ isi uru. Data emmepe na-kwesịrị nsogbu iji hụ ngwa ngwa Ibọrọ niile n'ókèala nke Europe na America njikọ maka ihe niile ahịa-erite uru site kacha mma mma na ọrụ nye. Ọzọkwa, The ụlọ a na-emi odude ke Europe bụ otu n'ime ndị kasị baa ọgaranya ebe nke n'okpuruala mmiri, Nke a ga-emepe-ekwe omume ịrụ otutu ServerVoIP, ebe obibi na pụrụ iche jụrụ usoro ndammana.
The data center a lekwasịrị anya na arụmọrụ na gburugburu ebe obibi na-elekọta, nchekwa na nnweta akụrụngwa na ụlọ ọrụ. Ya mere, Ọ oji kasị elu na o kwere omume integrated nche echiche na ana achi achi data nnweta. The otu ana achi achi afọ ojuju na akụrụngwa dị mgbe niile na elu arụmọrụ na-enweghị ntụpọ.
The Data Center bụ data na-eme ka ndị ọzọ ume ịzọpụta nakwa banyere gburugburu ebe obibi na otú obere dechapụ mmetụta nke okpomọkụ n'ụwa. The ọcha na-eji na data center ndị kasị mma na ume ọrụ ịzọpụta, (Nkesa, Gbasie ngwaọrụ na ihu igwe nkeji). The idụhe usoro na nsogbu na-mma na nnukwu ụlọ na ruo 60% obere oriri ike, na arụnyere usoro nwere mma arụmọrụ ihe na ahịa ruo 96%.
Dizel generators n'ihi na mberede ike ọkọnọ ke data center na-arụ ọrụ na steeti engines na MTU Usoro, klas na-eduga na okwu nke umu anwuru. Na ha nwere kasị ala emission ụkpụrụ dị ka TA-Luft 1/2 (oru ntụziaka maka ọcha ikuku, site German Ministry of Environment). A ọnụ ọgụgụ nke nchebe dizel generators nyere aka gbochie ọ bụla mmanụ abanye gburugburu ebe obibi, ka ihe atụ n'oge na-ejuputa ma ọ bụ leakage.
ISO Asambodo 27001:
TÜV Saarland (Nka na ụzụ Nnyocha Authority na Germany) datadock ka gbaara na-ezukọ na ISO ọkọlọtọ 27001. Datadock: bụ datacenter ebe sava na-chọpụtara www.ServerVoip.com, dị ka The International Standard ISO 27001. La Norma ISO 27001 na-akọwa ihe ndị a chọrọ maka iguzobe, mmejuputa iwu, ime ihe na nlekota nke a nchekwa management usoro nke akwukwo ọmụma (ISMS n'ihi na ya acronym na English ozi nche management usoro). The chọsiri ike inweta TÜV ISO 27001 na-egosi na ojiji nke oru oma management nke nche iji chebe ahịa data. Nke a pụtara na niile ịchekwa ma hazie datadock data na-echebe megide n'enweghị ikike ohere ma ọ bụ mmebi.
Servidores VoIP na VoipSwitch
Anyị na-enye ihe kasị mma maka gị ụlọ ọrụ ebe ọ bụ na IP Telephony 2008 en todos los rincones del mundo!
E nweghị ndị na ngọpụ maka ihe ego online: M malitere m ụlọ ọrụ VoIP telephony n'aka ServerVoIP.com na-a zuru ụwa ọnụ na-eweta nke ọrụ oku mobile phones na landlines Internet. Ugbu a, m na-akwụ m ahịa multiple nhọrọ dị ka hostings, software, ngwaike, mgbasa ozi, gụnyere ndị ọzọ.
M na-eche m ụlọ ọrụ 8 isi mmalite nke kpọmkwem ọrụ n'obodo m na-eme ọtụtụ puku ọrụ n'ụzọ ihe karịa ihe 19 mba: Colombia, Peru, Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Guatemala, Dominican Republic, Costa Rica, Puerto Rico, Mexico, United States, Spain, Brazil, Italy, Andorra, Morocco, Japan na Ecuador.
Con Call Speed, quiteña ụlọ ọrụ, nos dedicamos a la comercialización de telecomunicaciones y productos tecnológicos. Desde hace ocho años y gracias a la plataforma de ServerVoIP.com con soporte y video-tutoriales; Anyị nwere ike inye ọrụ na Spanish ka ụlọọrụ ahịa na usoro Internet ekwentị oku.
DataCenter VoIP Rent Nhọrọ Gị n'Ihe VoIP Raara Onwe Servers!
N'ihi na mgbazinye ma ọ bụ mgbazinye nke raara sava Internet telephony (VoIP) Ọ bụ ServerVoIP na VoipSwitch!
Sie7e Ọ nwere ike mere na ihe ịga nke ọma entrepreneur na-amalite ha onwe ha azụmahịa VoIP Internet Telephony!
Banye maka gị free akụkọ
Respetamos 100% nzuzo gị, Anyị na-adịghị eziga spam na gị ọmụma dịghị mgbe a ga-akọrọ. Lelee anyị política de privacidad.
suscriptor(Ọ bụ): 0
email Marketingsite GetResponse
ekwentị: (001) 8455841672
Address: Juan Francisco Cevallos 3-55 na Luis Toro Moreno, Ibarra-Ecuador